I-Animaker: Do-It-Yourself Animation Studio, Isihleli Sokumaketha Ividiyo, kanye Nomakhi Wezikhangiso Zevidiyo | Martech Zone
Ividiyo egqwayiziwayo futhi ebukhoma iyadingeka kuyo yonke inhlangano. Amavidiyo abandakanya kakhulu, anekhono lokuchaza imiqondo enzima ngamafuphi futhi anikeze umuzwa obonakalayo futhi ozwakalayo. Ngenkathi ividiyo ingumthombo omangalisayo, imvamisa ayinakunqotshwa kumabhizinisi amancane noma abathengisi ngenxa yezinsizakusebenza ezidingekayo:
Imishini yobuchwepheshe bevidiyo nomsindo yokurekhoda.
Ama-overs wezwi anobuchwepheshe emibhalo yakho.
Ihluzo zobungcweti nemifanekiso yokufaka.
Futhi, mhlawumbe, insiza ebiza kakhulu futhi ebucayi - ukuhlelwa kobungoti komthelela.
Izindaba ezinhle ukuthi siyaqhubeka nokubona ukuthuthuka - kokubili kwi-hardware naku-software. Ifoni yesimanje ingarekhoda ividiyo enhle ezinqumweni ezicebile ze-4k. Faka imakrofoni engabizi futhi umsindo wakho uzophelelisa umuzwa wokubuka. Isendlalelo kuma-intros, ama-outros, umculo, ukubukwa, noma ukugqwayiza futhi ungaba nesiqeshana esisebenzayo sokumaketha okuqukethwe ngaphandle kokwephula ibhange.
Ipulatifomu ye-animation ye-Animaker nokuhlela
I-Animaker's umakhi wokudonsa nokudonsa wenza kube lula kunoma ngubani ukuthi adale amavidiyo we-pro-level animated asebenzisa izifanekiso ezenziwe ngaphambilini kanye nempahla ekulungele ukuya phambili enamakhono obuchwepheshe we-zero. Ipulatifomu yakhelwe abantu noma amaqembu ukuthuthukisa noma yiluphi uhlobo lwevidiyo.
Abamakethi basebenzisa i-Animaker ekubukeni komkhiqizo, amavidiyo agibela, amavidiyo achazayo, amavidiyo achazayo opopayi, amavidiyo wokubonisa, ubufakazi bamakhasimende, izethulo zebhizinisi, izikhangiso zamavidiyo, imibukiso yamaslayidi, amavidiyo e-Instagram, amavidiyo we-Facebook, namavidiyo we-Youtube nezikhangiso zamavidiyo.
Esinye sezici ezinhle kakhulu ukuthi i-Animaker ikuvumela ukuthi uphinde ufake ividiyo yakho kuma-platforms ahlukene kalula. Vele uchofoze kunkinobho yokushintsha usayizi bese ushintsha phakathi kwezinhlobo zamavidiyo ahlukene ngokushesha.
Nazi ezinye izici ezinhle nokusebenza:
Isitudiyo sopopayi se-Animaker sikuvumela ukuthi ukwazi ukuklama nokushicilela ividiyo yakho egqwayizayo ngawo wonke amathuluzi adingekayo:
Umakhi Wezinhlamvu - Ngezici zobuso ezingaphezu kwe-15 ukwenza ngezifiso nangaphezulu kwezindawo zokufinyelela eziyi-10, yakha umlingiswa owufunayo bese uphunga amavidiyo akho!
Isimo sobuso bohlamvu - Ngobuso obungaphezu kwama-20, i-Animaker iyasiza ukwenza abalingiswa bakho namavidiyo aphile.
Ukuvumelanisa okuzenzakalelayo kwe-Lip - Faka ama-voiceovers kubalingiswa bakho bese uwabuka esho nge-auto lip-sync. Awudingi ukuchitha isikhathi uvusa izindebe zomlingiswa.
Ukuhamba Okuhlakaniphile - Izidlalisi zisebenzisa cishe ama-80% wesikhathi sazo ukugqwayiza izinto ukusuka endaweni eyodwa kuya kwenye. Futhi sinqume ukonga isikhathi nomzamo wakho. Gqwayiza opopayi abayinkimbinkimbi usebenzisa i-Smart Move ngokuchofoza nje inkinobho.
Dala ukugqwayiza kwakho kokuqala manje!
Faka ingxoxo yakho, ubufakazi, noma enye ividiyo eqoshiwe futhi I-animaker inikeza ngamathani wezici ezinjengemiphumela yekhamera, imiphumela yesikrini, amathrekhi alalelwayo, ukuhwebelana, nokuningi ukwengeza ukuzwa kweleveli ye-pro kuvidiyo yakho.
Ukuhlelwa Kwevidiyo Okubukhoma nekhwalithi yevidiyo engu-4K - Khetha, ulayishe, futhi uhlele amavidiyo konke endaweni eyodwa. I-Animaker ikuvumela ukuthi ugqame ngamavidiyo wekhwalithi eyi-4K acwebile.
Imibhalo engezansi yamavidiyo akho - Nge-Animaker, ungabeka imibhalo engezansi kalula amavidiyo akho ukuze ayilungele yonke ipulatifomu.
Imbondela Imiqophi ngokuchofoza - Amavidiyo anqwabelanayo ngombhalo, izithombe, izitika, nokuningi.
Watermark Okuqukethwe Kwakho - Faka kalula uphawu lwakho kumavidiyo akho nakuma-GIF nge-watermark yakho.
Izimpahla Zamasheya - Izimpahla ezingaphezu kwezigidi eziyi-100 ongazisebenzisa. Umtapo wezincwadi we-Animaker ubuye uhlanganiswe nalawo we-Getty ukuthola kalula isithombe noma ividiyo ephelele yephrojekthi yakho!
Umculo WaseRoyalty Nemiphumela Yomsindo - I-Animaker ikumbozile ngaphambili komsindo ngamathrekhi omculo angaphezu kwekhulu nezinkulungwane zemisindo kulabhulali yethu yomsindo.
Dala ividiyo yakho yokuqala manje!
I-Animated GIF noMdali Wevidiyo Emifushane
Ama-GIF e-animated ayathandeka kwezokuxhumana nakwezentengiso ze-imeyili… Umtapo wezincwadi we-Animaker nawo uhlanganiswe neGiphy ukuthola kalula i-GIF ephelele yephrojekthi yakho!
Dala i-GIF yakho ye-Animated Manje!
Ukusebenzisana nokuphathwa komkhiqizo
Mema ozakwabo eqenjini ukuthi basebenze ndawonye ekuqedeleni amavidiyo akho. I-Animaker iphinde inikeze ngekhithi yomkhiqizo ukuqinisekisa ukuthi ubuqotho bomkhiqizo wakho buhlala buhambisana kuwo wonke amavidiyo owashicilelayo.
Ikhalenda Lokumaketha Ividiyo
Abasebenzisi manje bathola ikhalenda lokumaketha ngevidiyo eligcwele imibono yevidiyo ehehayo ukukusiza uhlele futhi udale amavidiyo wazo zonke izinsuku ezikhethekile unyaka wonke. Mane uzulazulele esigabeni esinenyanga yamanje njengesihloko sayo futhi uzoba namathani wemibono yokuqukethwe kwevidiyo efakazelwe ukuqinisa ubukhona bakho bezokuxhumana.
Ama-Overs Aqhutshwa Ngezwi A-AI
Ipulatifomu lifaka nokuhlakanipha kwezwi ukwenza ngezifiso futhi kukhishwe iskripthi sakho ngaphandle kwesidingo sokuqasha ithalente. Izwi lika-Animaker likwenza ukwazi uku:
Izwi elifana nelomuntu - Guqula kalula umbhalo wakho noma iskripthi siye kukhwalithi ephezulu yezwi elifana nelabantu.
Izilawuli Ezithuthukisiwe Zezwi - Faka ithoni, ume, noma ugcizelele kunoma yiliphi igama elikhethiwe. Ungenza ngisho izwi lihlebezele noma liphefumule.
Izinketho eziningi zezwi - Dala ama-voice-overs kumavidiyo akho ngamaphimbo angama-50 + nezilimi ezi-25 ezahlukahlukene.
Dala i-Voiceover Manje
Ukudalulwa: Ngingumxhumanisi we- I-animaker futhi banezixhumanisi zabo kuso sonke lesi sihloko.
Tags: aiizwi-ngaphezului-voiceoveri-animakergif animatedAnimationisitudiyo sopopayiHudula bese uphonsaukuphumashintsha usayizi wevidiyoisitokwe izithombeividiyo yesitokoukusebenzisana kwevidiyoukuhlela ividiyoikhalenda lokumaketha ividiyoukushicilelwa kwevidiyoisitudiyo samavidiyoizifanekiso zevidiyoizwiiphimbo elengeziwe